Foto na ese foto ese foto | Akụkọ akụrụngwa
Onweghi uzo webusaiti raara nye uwa foto enweghi oghere maka foto. Maka nke a, n'ụdị a, anyị ga-egosi gị ọtụtụ narị foto dị iche iche, n'ụdị dị iche iche, nke onye edemede ọ bụla na isiokwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto, mee ka onwe gị dị mma, meghee anya gị ma kwadebe ịnụ ụtọ.
na obere igwefoto na ihe ntighari (DSLR) Ha gbanwere ụwa nke foto, na-eme ka anyị niile nwee ike ịbụ ezigbo ndị na-ese foto, na-enwe ike ịnweta snapshots kwesịrị onye ọkachamara ma ọ bụrụ na anyị amata usoro dị iche iche nke igwefoto zuru oke na ahịa nyere. Ọ bụrụ na anyị họrọ ihe ngosi, anyị nwere ike ịnwe ihe mgbaru ọsọ dị iche iche Ezubere maka ọnọdụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata igwefoto kachasị mma na ahịa ma ọ bụ ịmata nke kachasị mma maka mkpa gị, Akụrụngwa Actualidad ga - enyere gị aka ịhọrọ nke ọma.
Ngwa foto kacha mma nke izu
por Akụkọ akụrụngwa eme 1 ọnwa .
Foto abụrụla ụzọ kachasị mma iji mee njem anwụghị anwụ, nri ezinụlọ, ụbọchị ọmụmụ, oriri na ọṅụṅụ, ijikwa ịchekwaa ruo mgbe ebighị ebi ...
Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji tinye ndabere ọcha na foto
por Paco L Gutierrez eme Ọnwa 12 .
Idozi foto bụ ihe ruru onye ọ bụla nwere ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ kọmputa nwere ike iru na nke a anyị ...
Esi agba agba foto na oji
por Ignacio Sala eme 2 afọ .
Anyị niile nwere onye ikwu megoro okenye, ma ha nne na nna ochie ma ọ bụ na ha bụ ndị ikwu, ndị nke na-achọ ịlụ ụbọchị ...
Na-agbakwunye ọnọdụ na foto
Smartphones emeriwo agha ahụ site na mbufere nke igwefoto igwefoto ọdịnala, mana ọ bụghị kpọmkwem n'ihi ogo ha, mma ...
Leica C-Lux, ọhụụ dị oke ọnụ mara mma mara mma na ihe mmetụta 1-anụ ọhịa
por Ruben gallardo eme 3 afọ .
Ọ bụ eziokwu na ahịa maka igwefoto igwefoto abụrụla nke esiri na smartphones jisi ike. Ọ bụ…
Canon na-akwụsị ire igwefoto analog ya kachasị ọhụrụ
por Edere Esteban eme 4 afọ .
Analog foto na-ewe isi kụrụ si Canon. Maka na ụlọ ọrụ amaala ọkwa na ha akwụsị ire ...
Nyochaa Insta360 Pro
por Nacho Cuesta eme 4 afọ .
Ahịa igwefoto ogo 360 ji nke nta nke nta na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ, agbanyeghị, na ...
por Ignacio Sala eme 4 afọ .
Companylọ ọrụ ndị Japan Panasonic, banyere ụwa nke foto, afọ ole na ole gara aga na nnukwu ihe ịga nke ọma ...
Tụnyere nke kacha mma ama ese foto na ahịa: Huawei P20, iPhone X na Samsung Galaxy S9 +
Ọ bụ Apple na Samsung na-eduzi ọkwa dị elu na ụwa nke ekwentị mkpanaka, ...
Ọnwa ole na ole gara aga ka anyị gwara gị banyere igwefoto Olympus ọhụrụ. Nke a bụ Olympus nso ...
GoPro Hero, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara igwefoto ya nwere ike ịnweta
por Ruben gallardo eme 4 afọ .
GoPro, akara ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama na ama ama na-eme ka mmadụ gosipụta ụdị ngwa ahịa kachasị site na katalọgụ ya. Ama m…
Zipu ọdịnaya iPhone gị na TV na-enweghị Apple TV
Otu esi ejikọ igwefoto Canon PowerShot ma ọ bụ IXUS Wi-Fi na igwefoto
ISO, ASA na DIN